Kana Instagram Ikuudza Iwe Mushandisi Haana Kuwanikwa ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
July 12, 2019 0 mashoko 8872
Chii chiri kunyatsoitika kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi hauwanikwe? Chokwadi zvakaitika kwauri kuti iwe enda kushamwari yeshamwari pa Instagram uye izvo zvinogumbura zvinoratidzika kwauri; Pane zvikonzero zvinoverengeka nei izvi zvichiitika. Pano mune ino chinyorwa tichataura nezvezvikonzero zvinogona kuitika kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi hauwanikwe.
Iyi meseji inowanzobuda kana munhu akakudzivirira kubva pasocial network. Zvakare kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi hauwanikwe Imhaka yekuti kana iwe uchinge wavharwa, pasocial network inobvisa iwe kubva pakushandisa rombo, mune ino nyaya ona kana kufambidzana nemunhu akakuvhara.
Instagram inoudza mushandisi kuti haina kuwanikwa rini? Tsvaga pano!
Zvino, kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi hauwanikwe iwe uchafanirwa kutsvaga uye kutarisa kana vakanyatso kukuvharira iwe kana imwe kusagadzikana kwaitika. Imwe yedzimwe nzira dzinozivikanwa dzekuziva nadzo ndeyekuenda kubhurawuza mune zvisingazivikanwe chimiro uye wonyora mubha yekutsvagisa iyo URL URL nekuwedzera zita rezita romunhu waunoda kutsvaga.
Kana iyo chimiro ichionekwa kwauri nenzira yakajairika, usinga pinde mu yako Instagram account, zvinoreva kuti ivo vanokuvharira chaizvo. Kune rumwe rutivi, kana zvichiramba zvichikuratidza iwe meseji meseji kubva kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi hauwanikwe Zvinoreva kuti munhu wacho akabvisa kana kukanganisa account yavo kubva pasocial network.
Pane dzimwe nguva, zvinoitika kuti iwe wavharira mushandisi, uye kunyangwe kuvhura iyo yakafanana "mushandisi akawanikwa" meseji ichiripo; Izvo zvinoitika kana chimiro chakavharwa pane iyo Instagram puratifomu kwenguva yakareba. Kana izvi zvirizvo, saka tinotsanangura nzira yekuzvigadzirisa.
Matanho ekusunungura mushandisi
Enda ku Instagram.
Tsvaga iyo icon icon uye uwane yako account.
Wobva waisa icon yezvigadziriso iri mukona yekurudyi yekona.
Kana sarudzo dzave kuratidzwa, sarudza iyo inoti "Zvirongwa".
Pashure pacho, sarudza iyo "Yakavanzika uye Yekuchengetedza" sarudzo.
Kana izvi zvangoitwa, isa chikamu che "Akavharwa maakaunti".
Pano iwe unoratidzwa runyorwa rwevanhu vese iwe wavharira munharaunda yekudyidzana. Sarudza yaunoda kuvhura.
Pakupedzisira, iwe uchafanirwa kusarudza bara iyo ichaonekwa pasi, uye tinya pane "kuvhura".
Kana matanho ese apera, unogona kuenda ku profil account yawavhura uye tarisa kana "mushandisi akawanikwa" meseji haisipo. Kana zvirizvo, imhaka yekuti wakabudirira kuvhura mushandisi uye ivo vaviri vanogona kutaurirana zvakare.
Kuvhura sei mushandisi akandivharira pa Instagram?
Vazhinji vashandisi pa Instagram vanoshamisika kana izvi zvichibvira, uye kwete chaizvo. Hapasisati paine nzira inokubvumidza kuti uite chiito ichi. Kana mushandisi akakurambidza iwe hapana kudzokera kumashure, kunze kwekunge munhu iyeye afunga kukuvhura pane imwe nguva. Kana iwe uine kusawirirana, zvakanaka kuti utarise kutaura wega uye gadzirisa mamiriro acho ari kunze pasocial network.
Zvino, kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi hauwanikwe Panezve mukana wekuti iwe ndiwe wakagadzira block. Isu tinokurudzira kuti utevere nhanho dzakatsanangurwa pamusoro. Nenzira iyi, iwe unogona kudyidzana zvakare nemumwe munhu uye zvinopesana.
Iko kukanganisa kuvhura mushandisi we Instagram
Imwe yemhosva dzakajairika pa Instagram kutsvaga vanhu vakavharwa nekuti vanga vaine mutsauko. Zvino, kana mamiriro ezvinhu akangogadziriswa, vanoenda kune yemushandisi nhoroondo kuti avhure, asi ivo vanowana dambudziko muchimiro cheshoko. Kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi haina kuwanikwa mune munhu iyeye, unogona kuenda kune imwe nzira kuti usunungure iyo; Enda kumatanho atatsanangura pamusoro apa.
Chimwe chikonzero, kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi hauwanikwe ndewekuti mumwe munhuwo akakuvhara. Muchiitiko ichi, kana maprofile ese maviri akavharwa, haazokwanisi kuwona zviitwa zvakaitwa neumwe. Unogona kushamisika, zvinoitika sei kuti mumwe mushandisi akandivharira panguva imwe chete neni? Chokwadi ndechekuti zvakaoma, asi kwete kuti hazvigoneke kuzviita.
Nekudaro, nekuda kwekuenderera mberi uye nekuvandudzwa kwe Instagram chiito chinogona kuitwa. Izvi zvinokonzerwa nekuwanda kusingaverengeki uye mafoni maficha anokubvumidza kuti uvharise munhu akakuvharira kutanga. Ndokusaka, kazhinji kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi hauwanikwe uye watovhura mushandisi, imhaka yekuti wakakudzivirira.
Nekudaro, izvi zvinogona zvakare kuitika nekuda kwekukanganisa kwekushandisa; Inogona kugara kwemaawa mashoma. Kana zvikaramba zviripo tinokurudzira kuti iwe uninstall uye simisazve chishandiso zvakare, nenzira iyi ichavandudzwa.
Instagram inoudza mushandisi kuti haina kuwanikwa rini?: Mutual blocking
Sezvatakambotaura, kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi hauwanikwe, kana kana iwe uchivharira munhu uye iye / iye achibva anyangarika kubva pane yako yakavharika runyorwa, zvinowanzoitika kuti munhu anenge abvisa account yake, akagwinha kana kukuvharira nekuda kwekunyorera kana zvekuwedzera zvataurwa pamusoro apa.
Kana iwe uchida kuratidza izvi, iwe unogona kutsvaga shamwari inotevera munhu iyeye uye yekutarisa kuti iwe uone kana akabvisa account yake. Imwe sarudzo ndeyekuti iwe enda kubhurawuza uye tsvaga incognito mode iyo yemunhu pasina kana iwe wakapinda yako wega Instagram account.
Imwezve mukana ndeyekuti nekuda kwemashandisirwo uye kuwedzerwa kwatakambotaura, mushandisi anoona kuti wakazvivharira, uye saka chakakudzivirira futi. Haisi chinhu chinofanira kuitika, asi iyo nyika yemagariro vanhu yakazara nezvakawanda zvekusuwa.
Muchiitiko chekuti iwe wavhurira munhu uye waona kuti munhu akakuvharira, pane mhinduro dzinogona kubatsira mune idzi mamiriro. Tevere, tichazotaura zvishoma nezvazvo.
Imwe yekutanga iwe yaunogona kunyorera ndeye kutsvaga pikicha iyo munhu iyeye akaiswa uye edza kuisa iyo profil. Pakutanga, Instagram inogona kukupa iwe "mushandisi asina kuwanikwa" meseji, usakanda mapfumo pasi. Ramba uchiedza kusvikira iwe waona aya matatu manongedzo anoratidza mamiriro ari pakona yekurudyi yekona. Kana chave chaonekwa, iwe unosarudza icho, unotsvaga sarudzo ye "kuvhura", uye voila! Iwe unozogona kuona izvo munhu zvinyorwa zvakare.
Kana izvi zvisingashande iwe, pane imwezve mhinduro. Edza kupinda kubva pakombuta, pane izvi unofanirwa kurodha Instagram app kubva kuMicrosoft Store. Kana izvi zvangoitwa, tevera matanho ese atsanangurwa pamusoro apa kuti uwane iyo mbiri uye isunungure iyo.
Yako Instagram account yakavharwa: Chii chekuita?
Kana iwe wasvika pano imhaka yekuti iwe ungangove uri mubatwi we Instagram uye account yayo yakavharwa pasina chikonzero chiri pachena. Ndokusaka kuburikidza nechinyorwa ichi, tichataura nezveshuwa mhinduro huru dzaunogona kushandisa kuti usunungure kuwana kune yako Instagram account uye kukwanisa kuishandisa zvakajairika zvakare.
Izvo zvakakosha kuti tifunge kuti izvi zvinogadziriswa zvinoshanda chete kumaakaundi akaitwa neArcade kana akaremara. Kana, kune rumwe rutivi, Instagram yadzima account yako, aya matipi haakwanise kushandiswa. Kana iri yako nyaya, tinokurudzira kuti ugadzire iyo Instagram account.
Nzira iri nyore yekuziva kana Instagram yakavhara kana kuremadza account yako, ndeyekuti paunopinda, meseji inotevera inowoneka: "Akaunti yako yakagadziriswa." Izvi zvinoreva kuti account yako ichiri kushanda, asi haugone kuiwana. Kazhinji, izvi zvinoitika kana watyora mutemo kana mutemo wekushandiswa kwepuratifomu.
Kuti uone kana account yako yakavharwa chaizvo uye isina kubviswa, tinokurudzira kuti upinde uchibva kune imwe foni. Kana iwe uchikwanisa kuwana chimiro chako, iwo akanaka nhau, sezvo isina kubviswa. Muchiitiko ichi, Instagram yakavharidzira kupinda kuaccount yako kubva pafoni pawakazvigadzira.
Inogona kufarira iwe: Nzira yekuziva sei kana iwe wakadzimwa pane Instagram?
Kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi isina kuwanikwa: Tora kuwanikwa kubva kuaccount yako!
Kazhinji, apo Instagram inovhara account, izvo chikuva chinoita kuvharidzira ID yako kana yako chaiyo Google account. Kana iwe ukashandisa foni yeAroid, zvaunofanira kuita kugadzira nhoroondo yeGoogle itsva. Tevere, isu tichatsanangura matanho aunofanirwa kutevedzera
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kusaburitsa iyo Instagram app.
Kana izvi zvangoitwa, ita backup yefoni yako yese.
Dzosera foni yako kune yayo yekutanga fekitori mamiriro. Ita shuwa kuti iwe uzere ne backup yako yedata, sezvo ivo vachizobviswa.
Gadzira iGoogle account nyowani.
Batanidza iyo account itsva kune yako foni.
Pakupedzisira, dhawunirodha uye isa iyo Instagram app zvakare.
1 Instagram inoudza mushandisi kuti haina kuwanikwa rini? Tsvaga pano!
1.1 Matanho ekusunungura mushandisi
2 Kuvhura sei mushandisi akandivharira pa Instagram?
2.1 Iko kukanganisa kuvhura mushandisi we Instagram
3 Instagram inoudza mushandisi kuti haina kuwanikwa rini?: Mutual blocking
3.1 Zvinogona kugadziriswa
4 Yako Instagram account yakavharwa: Chii chekuita?
4.1 Kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi isina kuwanikwa: Tora kuwanikwa kubva kuaccount yako!
Kana Instagram ichivhara account